Vana vanoona hupenyu hwezuva nezuva kuburikidza nemadhora uye mbatya dzemadhora
Dollhouses uye doll furniture
Dzimba dzomutoro dzinokurudzirawo unyanzvi hwemutauro kuburikidza nemitambo yemitambo
Dzimba dzomutoro dzinofananidza hupenyu hwezuva nezuva
Dzimba dzomutoro dzinoenderana zvakanaka mumakamuri evana vakawanda. Nefuma yefoshu vana vanogona kugadzira mhuka yavo yepasi pose. Asi nhovo dzesimbi dzinobatsirawo sekiyi yekudzidza?
Dhongi Simba - ita zvisikwa zvezuva nezuva
Mhinduro iyi iri pachena "hongu" - uye nenzira dzakawanda.
Dollhouse uye doll famani
Vana vanodzidza mumutambo uyu kuburikidza nekuenda kune mamwe mabasa uye kuita tsika yakawanda kana isati yasarudzwa.
Dzimba zvidhori, sezvaunogona kutengesa mumatoro akawanda ematayipi emapuranga, kuumba mamiriro akakwana ekudzokorora hupenyu hwevanhu vakuru.
Dzimba dzomutoro dzinoita kuti mwana ave nehuwandu chaihwo, achiita kuti zvifanane nemamiriro ezvinhu umo vana vanoyeuchidzwa nezve "hupenyu hwakarurama". Izvi zvinoreva kuti vana vanofambiswa nemapurisa emapurisa kuti vadzokere zvakare maitiro anochengetedzwa nevabereki vavo.
Somugumisiro, kune chidzidzo chekudzidzira kaviri
Chokutanga, vana vanofananidzira maitiro evanhu vakuru mumamiriro ezvinhu aya. Izvi zvinoreva kuti vana veshumo fenisha inovabatsira kuti vashandise mamwe mabasa ezuva nezuva uye pamusoro pezvose kuti vawane zvinoreva shure kwavo. Mumwe anogona zvechokwadi kuedza kutsanangurira mwana chikonzero chiyiko chiri mu cupbiti kana kuti nei chingwa chichiiswa muchoto.
Chero kana mwana akabvumira kuti aite zvinotevera zviito izvi zvichava nechokwadi chokuti akanyatsonzwisisa izvo amai kana baba vari kuita nenzira iyi. Kutevedzera kwekare ndiko danho rinokosha pakudzidza mararamiro evanhu. Muchidimbu: nedzimba dzesimbi, mwana anopiwa nzvimbo yekudzidzira kwaanogona kudzidzira nekuisa upenyu hwavo hwezuva nezuva.
Izvi zvinozoguma mune yechipiri, zvinokosha. Inogona kutinhira isingawanzoiti, asi chikwata chinodha chinogona kubatsira zvikuru kutora mutauro wemwana. Nheyo yekutanga pano zvakare zvakare kuti chikwata chinodhura chinoumba mamiriro ezvinhu akafanana neaya ayo vabereki vanoita. Ichokwadi kuti mufambiro wevabereki unoda kuti vataure.
Mwana anowana uye anovandudza unyanzvi hwemutauro wake nekutevedzera vabereki. Sezvakatsanangurwa, simbi yehomwe inogadzira nzvimbo iyi chaiyo iyo vana vanokurudzirwa kuti vadzokerezve maitiro evabereki nenzira yakazara. Kana mwana wako ari kutamba nemadhora ake munzvimbo ino, ichareva zvimwechetezvo kana zvimwe zvinhu zvakafanana iwe unowanzoita.
Kubva pane zvinyorwa zvemaonero, mumwe angati pano, mwana wako anounza matauriro ako ekutaura mune zvakakodzera kushandiswa kwemamiriro ezvinhu. Mwana anoshandisa kushandisa mamwe mitsara nemazwi zvakarurama. Uye ndizvo chaizvo zvinobatsira mwana kuti anzwisise zvinoreva mazwi acho zviri nani.
Dzimba dzomutoro dzinongokurudzira kukura kwevana kuburikidza nekufananidza nharaunda umo vana vanogona kuita tsika dzevanhu uye maitiro anogadzikana. Zvisinei, hapana nzvimbo yakakwana muvana vese vanogadzira imwe firimu imwechete kana kupfuura.
Zvisinei, kana iwe usingadi kupa vana vako tsika yekuitazve kudzokorora uye kuita maitiro emagariro evanhu, unogona kuita zvakafanana kuburikidza nedhora. Mune chikwereti, mwana wako achawana mamiriro ezvinhu anenge akafanirwa nekudzorerazve zvakaitika. Zvakare, mwana wako anogona kutevedzera nekuita maitiro evanhu mumamiriro ezvinhu chaiwo.